» करिना कपुरले किन बिपाशा बसुलाई हानिन् थप्पड ?
करिना कपुरले किन बिपाशा बसुलाई हानिन् थप्पड ?
२२ पुष २०७६, मंगलवार २२:३७
बिपाशा बसुले फिल्म अजनबी ९सन् २००१० मा अभिनयको सुरुवात गरेकी थिइन् । अजनबीमा बिपाशा बसुसँग करिना कपुर मुख्य भूमिकामा थिइन् । अजनबीमा बिपाशा बसुसँगै करिना कपुर पनि मुख्य भूमिकामा थिइन् । साथै, अक्षय कुमार र बबी देओल पनि नायकको रुपमा मुख्य भूमिकामा थिए । तर उक्त फिल्मको सेटमा जे भयो त्यो आजसम्म पनि याद गरिन्छ । करिना कपुर र बिपाशा बसुको फिल्मको सेटमै झगडा भएको थियो । भारतीय मिडियामा सार्वजनिक भएका खबरलाई मान्ने हो भने उनीहरुबीचको झगडा यति धेरै बढेको थियो कि करिना कपुरले बिपाशा बसुलाई थप्पडसमेत हानेकी थिइन् ।
बिपाशाले सन् २००१ मा फिल्मफेयरलाई दिएको अन्तर्वार्तामा यसबारे यसो भनेकी थिइन्, ‘मलाई लाग्छ कि यसलाई तिलको पहाड बनाइएको हो । यदि करिनालाई डिजाइनरसँग समस्या थियो भने मलाई बीचमा किन तानिन् रु त्यो साँच्चै नै करिनाको अपरिपक्व व्यवहार थियो । म अब करिनासँग दोस्रो पटक कहिले पनि काम गर्ने छैन ।’
करिना कपुरले पनि यसबारे फिल्मफेयरसँग कुराकानी गरेकी थिइन् । सन् २००२ मा दिएको उक्त अन्तर्वार्तामा करिनाले भनेकी थिइन्, ‘मलाई लाग्छ कि बिपाशालाई आफ्नो क्षमतामा विश्वास छैन । उनले चार पानाको अन्तर्वार्तामा करिब तीन पाना मेरै बारे कुरा गरेकी छिन् । उनले आफ्नो कामबारे किन कुरा गरिनन् रु मलाई लाग्छ बिपाशाले अहिलेसम्म जति पनि लोकप्रियता पाएकी छिन् त्यो ‘अजनबी’ को सेटमा डिजाइनर विक्रम फडनीसको विषयमा मसँग भएको झगडाका कारण नै पाएकी छिन् ।’